China အပူကျုံ့အကာအကွယ်အဖုံးဘတ်စ်ကားဘားပူးတွဲ Box ထုတ်လုပ်သူနှင့်ပေးသွင်း | သမိုင်း
MPH busbar junction box ကို polyolefin irradiation ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော Die shrinkage busbar ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ သေတ္တာများဖြင့်တီထွင်သည်။ Transformer, arrester, outdoor switch နှင့်အခြား power equipment များတွင်အသုံးပြုသည်။ အောက်ပါလက္ခဏာများရှိသည်။
၁။ အက်ဆစ်၊ အယ်လကာလီ၊ ဆားနှင့်အခြားဓာတုပစ္စည်းများကြောင့်ဘတ်စ်ကားစီးခြင်းကိုကာကွယ်တားဆီးပါ။
၂။ ကြွက်များ၊ မြွေများနှင့်အခြားသတ္တဝါသေးသေးလေးများကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောတိုတောင်းသောဆားကစ်အမှားများကိုဖယ်ရှားပါ။
၃။ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု ၀ န်ထမ်းများမတော်တဆဝင်ရောက်မိသောလူနေမှုကွာဟမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောမတော်တဆထိခိုက်မှုကိုကာကွယ်ပါ။
၄။ ဖုန်မှုန့်၊ ညစ်ညမ်းမှုနှင့်ငွေ့ရည်ဖွဲ့မှုများကိုကာကွယ်ရန်ဘတ်စ်ကား slot များကြားရှိလျှပ်ကာပြbetweenနာကိုဖြေရှင်းပါ။
၅။ Voltage grade ကို 1kV, 10kV, 20kV, 35kV ခွဲခြားထားသည်။
၆။ သမားရိုးကျအရောင်များ - အနီရောင်၊ အဝါ၊ အစိမ်း၊ အပြာနှင့်အနက်ရောင်များကိုတိုက်ရိုက်ခွဲခြားထားသည်။ အခြားအရောင်များနှင့်အရွယ်အစားများကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည်။
MPH စီးရီးသည်လျှပ်စစ်ပိုင်းဆိုင်ရာကောင်းမွန်ပြီးရေစိုခံတံဆိပျဘေးကင်းလုံခြုံမှုကာကွယ်သည့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်တပ်ဆင်ရလွယ်ကူခြင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာလိုက်လျောညီထွေမှုရှိခြင်းနှင့်သက်တမ်းကြာရှည်ခြင်း၏ဝိသေသလက္ခဏာများရှိသည်။ ၎င်းကိုလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများနှင့်ဓာတ်အားခွဲရုံများတွင်ဘတ်စ်ကားချိတ်ဆက်မှု၏လုံခြုံမှုကိုကာကွယ်ရန်နှင့်အဓိကအားဖြင့်အသုံးပြုသည်။ နိုင်ငံခြားခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိတိရိစ္ဆာန်များမှထွက်သောတိရိစ္ဆာန်များတွားသွားခြင်း၊ လူ့ခန္ဓာကိုယ်အားလျှပ်စစ်ထိတ်လန့်ခြင်း၊ လေထုညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်ငွေ့ရည်ဖွဲ့ခြင်းများမှကာကွယ်ရန်တိုတောင်းသော circuit မတော်တဆမှုများ၊ လေထုနှင့်အန္တရာယ်ရှိသောဓာတ်ငွေ့များမှစီးဆင်းသောပစ္စည်းများမှချေးများကိုလျှော့ချခြင်းနှင့်လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ၏သက်တမ်းကိုတိုးမြှင့်ခြင်း။
1. ဆန့အစွမ်းသတ္တိ: & GT ကို; 15 mpa
၂။ ပြိုကွဲနိုင်မှုစွမ်းအား: & GT; 25 kv / MM
3. Volume ကိုခုခံကိန်း: & GT ကိုΩ။ 1014 စင်တီမီတာ
4. ဝန်ဆောင်မှုအပူချိန်: 55 - + 105 ''
5. အရောင်: အနီရောင်, အစိမ်း, အဝါရောင်နှင့်အနက်ရောင်
အနီရောင် - Connector သည် "L" အမျိုးအစား - 100x10 နှစ်ဆဘတ်စ်ကားဖြင့် 100x10 နှစ်ဆဘတ်စ်ကားစီးသည်
အစိမ်းရောင် - Connector သည် "L" အမျိုးအစား - ၁၀၀ × ၁၀x ဘတ်စ်ကားတစ်စီးဖြင့် ၁၂၀ x ၁၀ x ၁၀ ဘတ်စ်ကားဖြင့်ချိတ်ဆက်သည်
အဝါရောင်: ဒီ connector သည် "T" အမျိုးအစား: 80x10 နှစ်ဆဘတ်စ်ကားနှင့်အတူ lapped တစ်ခုတည်းဘတ်စ်ကား
အစိမ်းရောင် - "X" connector: 100x10 တစ်ခုတည်းဘတ်စ်ကားနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော ၁၀၀ x ၁၀ ဘတ်ကားတစ်စီး
နောက်တစ်ခု: တရုတ်ထုတ်လုပ်သူစီးပွားရေးအမျိုးအစားဗို့အားအနိမ့် switchgear လျှပ်စစ်စွမ်းအားဖြန့်ဖြူးဝန်ကြီးအဖွဲ့
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကုန်ကြမ်းမှကုန်ချောအထိကုန်ပစ္စည်းအထိတင်းကြပ်စွာထိန်းချုပ်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်ရှိသည်။ ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးသေချာစေရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖန်တီးနိုင်စွမ်းကိုတိုးတက်စေရန်အဆင့်မြင့်စမ်းသပ်ခြင်းဓာတ်ခွဲခန်း။ အရည်အသွေးနှင့်လုံခြုံမှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များ၏စိတ်ဝိညာဉ်ဖြစ်သည်။
(၂) ထူးချွန်သော ၀ န်ဆောင်မှုများ
နှစ်ပေါင်းများစွာကုန်ထုတ်လုပ်မှုအတွေ့အကြုံနှင့်ကြွယ်ဝသောပို့ကုန်လုပ်ငန်းသည်ဖောက်သည်အားလုံးအတွက်ကောင်းမွန်စွာလေ့ကျင့်ထားသောအရောင်း ၀ န်ဆောင်မှုအဖွဲ့ကိုတည်ထောင်ရန်ကူညီသည်။
အရေးပေါ် ဦး ဆောင်အချိန်ကျေနပ်အောင်ခိုင်မာတဲ့ထုတ်လုပ်စွမ်းရည် ငွေပေးချေပြီး ၁၅ ရက်မှ ၂၅ ရက်အကြား၌။ ဒါဟာကွဲပြားခြားနားသောထုတ်ကုန်များနှင့်အရေအတွက်အရသိရသည်ကွဲပြားခြားနားသည်။
(၄) OEM ODM နှင့် MOQ
မြန်ဆန်သောကုန်ပစ္စည်းအသစ်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ခိုင်မာသည့် R&D အဖွဲ့မှကျွန်ုပ်တို့သည် OEM၊ ODM နှင့်တောင်းဆိုချက်အမှာစာများကိုစိတ်တိုင်းကျကြိုဆိုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကတ်တလောက်မှလက်ရှိထုတ်ကုန်ကိုရွေးချယ်ခြင်းသို့မဟုတ်သင်၏လျှောက်လွှာအတွက်အင်ဂျင်နီယာအကူအညီရယူခြင်းများရှိမရှိ။ သင်၏အရင်းအမြစ်ရှာဖွေမှုလိုအပ်ချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ပြောပြနိုင်သည်။
ပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ MOQ သည်မော်ဒယ်များအတွက် ၁၀၀ pcs ဖြစ်သည်။ သငျသညျလိုအပ်ချက်အဖြစ်ငါတို့သည်လည်း OEM နှင့် ODM ထုတ်လုပ်ရန်။ ကျနော်တို့ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းအေးဂျင့်ဖွံ့ဖြိုးဆဲနေကြသည်။